डेउडा मेरो प्राण हो, प्राण त्यागेर कहा“ जान्छु“ र ? » Khulla Sanchar
डेउडा मेरो प्राण हो, प्राण त्यागेर कहा“ जान्छु“ र ?
डोटी जिल्ला कलेना गाविसमा जन्मनु भएका समधुर स्वरका धनी गायक सूर्य विरही साउँद, बुबा दिर्ग साउँद र आमा नरपाता साउँदका माइला छोराका रुपमा जन्म लिई २०६५ सालमा आफ्नो पहिलो डोटेली डेउडा गीती एल्बम पिरती फूल सारिदे मार्फत गायन यात्रामा प्रवेश गरेका साउँदले यहाँसम्म आउँदा संघर्षका निकै ओराली उकाली पार गरिसकेका छन् । उनी अहिले संगित क्षेत्रमा स्थापित भैसकेका छन् । उनै सूर्य विरहीसँग सहकर्मी केशव भट्टले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
१. पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म अहिले गीतसंगीतमै व्यस्त छु, मेरो आफ्नै म्युजिक कम्पनी छ, बसीबिँयालो म्युजिकमार्फत गीतसंगीत बजारमा पठाउने, रेकर्ड गराउने, साथीभाईहरुका गीतसंगित बजारमा ल्याउने काम गरिरहेको छु । विशेष गरी डोटेली भाषाको पहिलो चलचित्र धन्य माया जालमा पनि मेरो शब्दसंगित र स्वर रहेको हुनाले त्यही चलचित्रको प्रमोसन,च्यारेटि सो तथा प्रचारप्रसारमा लागिरहेको छु ।
२. सांगीतिक क्षेत्रमा कहिलेदेखि प्रवेश गर्नुभो ?
मैले २०६५ सालमा मेरो पहिलो गीति एल्बम पिरती फूल सारिदे मार्फत यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । अहिलेसम्म यसैमा लागिरहेको छु ।
३. संख्यात्मक हिसाबले के कति गीत गाउनु भयो ?
एल्बमको हिसाबले ३ वटा बजारमा आइसके । अनुमानित ६ दर्जन जति मैले अरुको गीत गाएको छु । आफ्नै गीत चाहीँ ५२ वटा जति पुगे होलान् ।
४. डेउडा भनेको के हो ?
यहाँ डेउडाबारे भ्रम छरिएको छ । डोटेली भाषाको गीतलाई डेउडा भाषाको गीत भनेर गलत उचारण गरिन्छ । यो बिल्कुलै गलत हो । डेउडा भाषा होईन भाका हो । डेउडा भनेको एक किसिमको साँस्कृतिक नाच हो । जहाँ डेड पाइला मिलाएर यो नाच नाचिन्छ र यसैसँग जोडेर आम जनमानसको जीवनमा आधारित अन्य समग्र जनजीवनलाई समेटेर तुरुन्तका तुरुन्तै सवालजवाफ हुन्छन् । डोटेली गीतभित्रको यो एउटा विधा हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । यहाँ भन्न गलत गरेका छन् । डेउडा र देउडामा फरक छ । देउड भनेको देवीदेवताको नाचमा गाइने गीत हो भने डेउडा चाहीँ हामी मानव जातिको रमाइलोको लागि गाइने गीत हो ।
५. पछिल्लो समय लोकसंगीतमा विकृति भित्रियो भन्छन् नी ?
विकृति भित्रियो भनिएको मात्र होइन,यथार्थमै विकृतिले जडो गाडिसकेको छ । डेउडालाई बिगारेर पप डेउडा भन्ने, डेउडा र्याप भन्ने तथा मौलिक पोसाक लगाएर नाच्ने ठाउँमा छोटो कट्टु लगाएर नाच्ने तथा छाडा शब्द प्रयोग गरी गीत बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यतिमात्र होइन, यो पैसा कमाउने उदेश्यले गाउन थालिएको छ । जसले लोकसंगीतको बलात्कार भएको छ । यो सरासर गलत हो । यसमा सरकारले हस्तक्षेप गरी सही मौलिक संस्कृतिको जर्गेना गर्नुपर्दछ । तपाईहरुजस्ता मिडियाका साथिहरुले पनि यसको संरक्षणमा सहयोग गर्नुपर्दछ । गितसंगित र संस्कृतिको लागि लागिपरेका संघसंस्थाहरुले पनि उचित भूमिका खेल्नुपर्दछ साथै मौलिक संस्कृति र कलाको संरक्षणको लागि आम नागरिकले लाग्नु पर्दछ ।
६. भावी योजना के छ ?
संस्कृति र गीत संगितसँग आवद्ध छु । अब त यसको नशा लागिसक्यो यसै डेउडा तथा सुदुरपश्चिमेली संस्कृतिको लागि मनवचन र कर्मले लागि पर्ने छ । नयाँ चलचित्र बनाउने तयारीमा छु साथै मौलिक कला संस्कृतिको लागि जीवन अर्पण गरेको छु र यसैमा योगदान गर्नेछु ।
७. अन्तमा छुटेको केही छ ?
सबैभन्दा पहिला त छलफल साप्ताहिक र तपाइप्रति आभारी छु । साथै आमदर्शन, श्रोताजनमा पनि आभार व्यक्त गर्दछु । यो सूर्य विरहीलाई आजसम्म उच्च मूल्याकंन गरेर अगाडि बढ्न हौसला दिनुहुने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । डेउडालाई माया गरिदिनुस्, गीतसंगितलाई जीवन्त राख्न सहयोग पु¥याउनुस्, आफ्नो माटो र मातृभूमिलाई सम्मान गर्नुस्, आफ्नै मौलिकताको लागि केही गर्नुस् ।
नेपाली गीतसंगीतलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागिदिनुस् । निकट भविष्यमा धन्य मायाजाल भन्ने चलचित्र हलहलमा आउँदैछ । त्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोस् यति भन्न चाहन्छु ।
छलफल साप्ताहिकबाट : साभार